YouTube Vhidhiyo Yekushambadzira Mafambiro Anogona Kupisa Muna 2022 - GoViral
musha » YouTube Vhidhiyo Yekushambadzira Mafambiro Anogona Kupisa Muna 2022
Kunyange zvirimo zvave zvichishandiswa pakushambadzira kwedhijitari kwemakore mazhinji, vanhu vazhinji vangave vasingazive nezvekushandisa mavhidhiyo mukukura mhando yavo. Nekudaro, vhidhiyo ndiye mambo mutsva wezvemukati uye YouTube ndiyo yakanakisa nzvimbo yekuishandisa!
YouTube inzvimbo yakakurumbira yekuwana mari yevagadziri vevhidhiyo mune dzakawanda niches, asi zvakare ndiyo inonyanya kufarirwa vhidhiyo chikuva chemhando dzese kuti dzizvitengese. Vanoda kusvika 86% yemabhizinesi akashuma aine YouTube zano 2021 kuti vazvishambadzire ivo uye kukura vateereri vavo. Muna 2022, kunyange mabhizinesi mazhinji achatendeukira kukushambadzira kwevhidhiyo.
Iwo epamusoro 5 maitiro ekutarisa
Nemabhizinesi mazhinji arikusarudza kushambadzira kwedhijitari nemavhidhiyo, mamwe maitiro acharamba asi mamwe achipera kana matsva apinda. Heano epamusoro 5
YouTube ekushambadzira maitiro 2022 achaunza izvo zvinogona kuenderera kwemakore mazhinji:
'Kuenda live' kwakafarirwa neFacebook ne Instagram asi iwe unogona zvakare kutarisira kuti maitiro aya kukura paYouTube muna 2022. COVID-19 payakakanganisa zvirongwa zvemunhu wese, kutenderera kwepamhepo kwakabvumira vanhu "kupinda" zviitiko zvavasingakwanise kufamba. ku. Aya maitiro achaenderera mberi kusvika muna 2022 uye mberi. Chiratidzo chako chinogona kubatsirwa nacho, kunyanya kana iwe uchitambira zviitiko zvakawanda. Vanhu vanobva kumativi ese enyika vanogona kujoina zviitiko zveYouTube Live, vachikura kusvika kwako zvakanyanya.
Paive nenguva yawaizoda midziyo inodhura uye timu yese kutora maminetsi mashanu evhidhiyo. Hazvisisina kudaro! Nevapesvedzera vesocial media vanenge vachingoshandisa mafoni kupfura mavhidhiyo, kudiwa kwemakamera anodhura nemimwe michina kwapera. Zvakare, nemakamera makuru ane mamwe mafoni, vashandisi havagone kusiyanisa pakati pezviri kupfurwa pafoni nekamera.
Kushandisa mavhidhiyo kutaura nyaya yemhando yako maitiro ari pano kuti agare muna 2022 uye mberi. Vlogging yakatanga nevanodya vlogger vachitumira mavhidhiyo ekubikira uye vafambi vachitumira nyaya dzevhidhiyo dzezviitiko zvavo. Kubva zvakakurumidza kubuda senzira ine mukurumbira yekutaura mhando kana nyaya yemugadziri uye kuvaka hunhu hwavo vachichengeta vateereri vachibatikana nezvinhu zvinobatsira. Inoshandiswawo zvakanyanya nevanokurudzira kusimudzira zvigadzirwa kana masevhisi avanoedza kana kubatana nawo.
Shorts mavhidhiyo emasekonzi gumi nemashanu kana pasi. Maitiro akatanga neTikTok pakutanga uye ikozvino zvakare yakatorwa neYouTube. Chinangwa chavo ndechekubvumira network yakakura yevagadziri veYouTube kuti vagadzire zvemukati zvakaruma izvo zvinogona kuenda kuhutachiona. Shorts inogona kushandiswa kusimudzira zvigadzirwa kana masevhisi ako mumavhidhiyo anodyiwa anochengeta vashandisi vakabatikana uye kupuruzira kuti utarise zvimwe.
Iwe unogona ikozvino kushandisa mavhidhiyo eYouTube kusimudzira chinzvimbo chewebhusaiti yako. Tsvagiridzo inoratidza kuti mapeji ewebhu ane zvemukati zvevhidhiyo anokwira zvakanyanya mumibairo yekutsvaga pane mapeji ane mavara chete kana mifananidzo. Kungoshandisa mavhidhiyo seyako SEO zano kunogona zvakare kukwidziridza peji rako zvakakwana zvekuti rinoratidza mune yekutanga-peji mhinduro. Imwe ongororo inoratidza kuti Google inoratidza zvemukati zvevhidhiyo padyo neinenge 26% yezvayatsvaga, uye vashandisi vanoita zvakanyanya nemavhidhiyo pane zvimwe zvirimo. Nekudaro, semamwe maitiro eSEO, iwe unofanirwa kuenderana, kuburitsa zvinobatika uye zvinobatsira zvemukati, uye kukwidziridza zvese zvako zviri kuseri.
Kushandisa yazvino uye iri kuuya YouTube kushambadzira maitiro kunogona kubatsira bhizinesi rako kukura uye kusvika kune vakawanda vateereri. Inogona zvakare kukubatsira kuita mari yako YouTube chiteshi nekuwana emahara YouTube maonero.
Kuti uwane emahara YouTube maonero, zvaanoda, makomendi uye vanyoreri pane yako YouTube chiteshi, shanya GoViral!
YouTube Vhidhiyo Yekushambadzira Mafambiro Anogona Kupisa Muna 2022 neGoViral Chikwata Chekunyora, 26 October 2021
Kubva YouTube payakatangwa muna 2005, chikuva chave nzvimbo inozivikanwa apo vashandisi vanoona, vanogovana, uye kurodha mavhidhiyo. Kuve yechipiri pakukura pakutsvaga injini munyika, chave chinhu chakakosha chishandiso che…